कलेज जान घरबाट नि’स्किएकी यु’वती बाटोमा मृ’त भे’टिन ! – PathivaraOnline
Home > अपराध > कलेज जान घरबाट नि’स्किएकी यु’वती बाटोमा मृ’त भे’टिन !
admin January 11, 2021 अपराध, समाज	0
काठमाडौँ। विहारमा एक युवतीको घाटी रे`टे`र ह`त्या भएको छ। युवतीको श`व विहारस्थित बरियारपुरको सडक किनारामा शुक्रबार बोरामा बाँ धेर फ्याकेको अवस्थामा भे’टिएको हो। बिहिबार कलेज जान नि स्किएकी उनी घर फर्किनन्। उनी सीतामढ़ीस्थीत किसान कलेजमा बि’ए पार्ट वानमा अध्ययन गर्थिन्।
यु वतीको दु`व्र्य`वहार गरेर ह`त्या गरेको प्रहरीको अनु मान छ। यस घट नाबारे थप अनुसन्धान भइ रहेको प्रह रीले जा नकारी दिएको छ।
दलालहरुले आफूखुशी यात्रुबाट चर्को भाडा लिइरहेको जानकारी पाउँदासमेत यहाँको प्रहरी प्रशासन मौन बसेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको कैलालीमा विगत लामो समयदेखि यात्रुहरु गाडी व्यवसायीबाट ठगिँदै आएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई ठूला सीमा नाका कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र कैलालीको त्रिनगरमा खुलेआमरुपमा दलालहरुले यात्रुबाट चर्को भाडा लिने गरेको देख्न सकिन्छ । दलालले यात्रुबाट चर्को भाडा असुले पनि त्यहाँ सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी भने मुकदर्शक बनेका हुन्छन् ।
कहिले गाडी नपाउँदा तथा कुनै समय प्रचलित दररेटभन्दा चर्को भाडा लिँदा उनीहरु वर्षेनी ठगिँदै आएको गुनासो सुनाउने गरेका स्थानीय नागरिकको भनाइ छ । आफूहरु पटकपटक गाडी व्यवसायीबाट ठगिएको गुनासो गर्दै आए पनि कसैले पनि त्यसको सुनुवाइ नगरेको भारतबाट रोजगारी गरी आएका यात्रुहरुको गुनासो छ ।
इटहरीमा श्रीमतिको ज्यान गएपछि केहिबेरमै श्रीमानको मृ..त्यु भएपछि…